Mayelana - Beihua Polymer Co. Yokusiza, Ltd.
Iphrofayela Yenkampani Culture Ukuhlonishwa Izinsiza kusebenza Inhlangano Umlingane Osebenzelana Naye
Jiaxing Beihua Polymer Co. Yokusiza, Ltd. yasungulwa ngo 2010 nge capital olubhalisiwe kwezigidi ezingu 73,155 yuan. Kuyinto ibhizinisi zobuchwepheshe onguchwepheshe ukukhiqizwa ahlukahlukene masterbatch zangaphambi abahlakazekile bengaba. Le nkampani elise Jiashan Zheshang Science and Technology Park. Itholakala maphakathi Shanghai, Hangzhou futhi Suzhou. It uyawuthanda zokuthutha elula, imvelo esiphakeme futhi izindawo ephelele asekelayo.
Le nkampani ubambisana Beijing University of Chemical Technology ukuthuthukisa emihle zangaphambi abahlakazekile bengaba iraba masterbatch. It ngokukhethekile ekuxazululeni izinkinga processing futhi ukuhlakazwa imikhiqizo iraba, ekuthuthukiseni imvelo bokusebenzisa iqhakambisa inqubo ukukhiqizwa. It has izici ekuthuthukiseni izinga lomkhiqizo, ukunciphisa umkhiqizo isici isilinganiso kanye kulondolozwa amandla. Ubuchwepheshe uguqulwe umkhiqizo.
Njengamanje, ukukhiqizwa umugqa yenkampani ngokukhiphayo minyaka yonke ongaba amathani 6.000 isifakwe ngokusemthethweni ekukhiqizeni, futhi kulindeleke ukuba asebenze ndawonye nabangani ekhaya aphesheya ukwakha ikusasa elingcono.